Fihetsika 9 mety hitarika ny namanao hiala - Fifandraisana
Ireo namanao dia toa lasa mangina kely tato ho ato. Ny findainao taloha dia nihozongozona tamin'ny farango, fa ny feon'iretsaka dia nosoloina feon-trondro.
Azonao atao ny mianiana fa nahita tumbleweed mihodinkodina namaky ny fahano Facebook ianao tamin'ny andro hafa.
Toa tsy manasa anao amin'ny zavatra matetika ny namanao, na mamaly amin'ny hafanam-po toy ny taloha ny hafatrao, fa ho an'ny fiainanao dia tsy azonao an-tsaina ny antony.
Ankehitriny, olona be atao isika rehetra. Mety misy zavatra maro mitranga eo amin'ny fiainany, ary mety hisy ny toe-javatra mampihena, saingy efa noheverinao ve fa ianao (farafaharatsiny ampahany) amin'ny olana?
maninona ny olona no manambany ny hafa
Fahamarinana masiaka ny miatrika fa ny fihetsikao dia mety hanilika ny olona sasany tianao indrindra.
Tsy ratsy daholo anefa. Rehefa dinihina tokoa, raha ianao no mahatonga ny olana, dia mety ho ianao ihany koa no manamboatra zavatra. Eo am-pelatananao ny hery.
Ireto misy zavatra vitsivitsy azonao atao, na amin'ny fahatsiarovan-tena na tsy mahatsiaro tena , izany no mety mahatonga ny namanao ho somary lasa lavitra tato ho ato.
1. Flaky ianao
Nahazo flakier lavitra be isika rehetra tamin'ity tontolon'ny haino aman-jery sosialy maoderina sy serasera eo noho eo ity, fa satria fotsiny manao izany ny tsirairay dia tsy midika hoe tsy maninona.
Ny tena namanao dia hahatakatra raha toa ka mila manafoana drafitra ianao indraindray, satria tsy mahatakatra izany fotsiny ianao, na manana antony marina hafa.
Na izany aza, raha manana laza ianao amin'ny fandoavana onitra tsy tapaka amin'ny minitra farany, dia amin'ny farany, hijanona tsy hanasa anao hanao zavatra fotsiny ny olona.
Iza no afaka manome tsiny azy ireo?
Raha mila manafoana ianao na, raha mahitsy fo amin'ny tenanao ianao dia tsy te-handeha fotsiny, alao antoka fa avelao hahafantatra izay efa nanaovanao drafitra ASAP mba hahafahan'izy ireo manao fandaharana hafa ary tsy avela ambony. ary maina.
2. Mifosa ao ambadiky ny lamosiny ianao
Na dia manomboka ny fehezanteninao rehetra amin'ny hoe 'tiako izy ireo, fa…,' dia tsy tokony tokony hifosa amin'ny namanao ao ambadiky ny lamosinao ianao, na dia miaraka amin'ny namanao aza.
Mazava ho azy fa hiafara amin'ny fifanakalozan-kevitra amin'izy ireo amin'ny olon-kafa ianao, ary azonao atao ny maneho ny ahiahinao na ny fiahiahianao azy ireo, na koa mihomehy am-pitiavana momba ny zavatra adaladala vitany, saingy tsy tokony hatao amin'ny fomba ratsy.
navelako ho an'ny vehivavy hafa ny vadiko ary faly aho
Tokony hanana ny tombotsoany marina foana ianao, ary tokony hanome azy ireo torohevitra tsapanao fa mety mahazo tombony amin'ny tarehin'izy ireo.
Ny resadresa tsy azo ihodivirana dia miafara amin'ny fanatonana ny sofin'ny lohahevitra, ary mety tsy ho tian'izy ireo izany. Mieritrereta foana alohan'ny hitenenanao, ary diniho ny mety ho fahatsapanao raha nisy olona noheverinao ho namanao nilaza zavatra mitovy aminao.
3. Fitsarana azy ireo
Izay tsy manam-pahotana dia aoka hitora-bato voalohany… sy izany rehetra izany. Ny fitsarana dia tsy zavatra mahafinaritra hatao, noho izany dia tsy tokony hataonao amin'ny namanao izany.
ahoana no hilazana raha misy vehivavy hafa saro-piaro anao
Isika rehetra dia manao zavatra izay mety tsy tokony hataontsika, ary mety fantatsika fa tsy tokony hataontsika rehefa manao azy ireo isika.
Na izany aza, tsy azontsika atao mihitsy ny mahafantatra ny tantara iray manontolo ao ambadiky ny antony nanapahan'ny namana iray ny zavatra ataon'izy ireo. Matetika dia misy toe-javatra mampihena. Na dia diso aza izy ireo dia tsy misy tonga lafatra.
Ny ilain'ny olona amin'ny sakaizany dia ny fanohanana, ary indraindray aza ny fanaovana ny marina amin'ny fomba feno habibiana, nefa tsy izany velively fitsarana .
4. Lazao azy ireo izay tokony 'hataon'izy ireo'
Mieritreritra ianao fa mahalala izay tsara indrindra ho azy ireo?
Ny torohevitra am-pitiavana dia zavatra iray. Na izany aza, misy ny tsy fitovizany sy ny milaza an-tsokosoko azy ireo fa mieritreritra ianao fa tsy mety ny zavatra ataon'izy ireo, ary avy eo mampahafantatra azy ireo hoe inona, araka ny hevitrao, no tokony hataon'izy ireo.
Tianao ve ny milaza aminao ny zavatra tokony hatao? Tsy noheveriko izany. Na ny namanao koa.
Ny fahaiza-manao eo amin'ny samy olona 5 izay manan-danja indrindra amin'ny asanao, ny fifandraisanao ary ny fiainanao
Famantarana 7 an'ny sakaiza sandoka: Ahoana ny fomba hahitana iray kilometatra iray
5. Miandry foana ny hahatongavan'izy ireo aminao
Moa ve ianao manome sosokevitra hetsika tokony hataonao, sa miandry azy ireo handamina ny zava-drehetra ianao?
Moa ve ianao mandray andraikitra voalohany? Ianao ve no iray izay maneno azy ireo hijery raha manao ahoana izy ireo?
Raha izy ireo hatrany no manomboka ny resaka ary manao fiezahana hifandray hatrany, ary tsy mahita ezaka avy aminao izy ireo, dia azo ihodivirana ny fotoana hahatongavan'izy ireo tsy hanelingelina.
6. Manantena mihoatra noho ny fahavononanao hanome
Manontany zavatra amin'ny namanao ve ianao fa tsy ho tianao hatao ho azy ireo?
Aza adino, ny ampahany lehibe amin'ny finamanana dia ny fifandimbiasana rehefa miresaka fotoana, vola, ezaka ary fitiavana.
Raha mangataka famindram-po foana ianao ary tsy mamerina azy ireo intsony, na tsy mampiseho ny fankasitrahanao, dia voatery hiafara amin'ny fahatsapanao azy ireo ho toa azy ireo ianao.
Izany rehetra izany dia ny fitadiavana ny mahay mandanjalanja ny fanomezana sy ny fandraisana.
inona no hatao rehefa tena mankaleo anao
7. Manao fahadisoana mitovy amin'ilay fotoana faha-10 ianao
Miverina miaraka amin'ny taloha taloha mahatsiravina ve ianao rehefa nisaraka tamin'ny 50fahafotoana? Mikiry ve ianao amin'ny fanapahan-kevitra raisinao ho azy? Sa fanapahan-kevitra mahatsiravina amin'ny ankapobeny, noho izany?
Raha eo foana izahay hanohana ny namantsika na dia toa adala aza ny fanapahan-kevitr'izy ireo, raha mahita olona iray tianao ianao amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra ratsy mitovy hatrany, tsy miraharaha ny fiantraikan'izy ireo na ny manodidina azy, dia tonga ny tondroy rehefa tsy afaka mipetraka intsony ianao ary mijery azy hitranga.
Raha miahy anao ny olona dia tsy te hahita anao hijaly izy ireo. Ho tonga ny teboka iray rehefa harary izy ireo ny sabotage-nao ary tsy hahatsapa ho afaka hanohana azy intsony.
Eritrereto ny fomba itondranao ny tenanao ary raha toa ianao ka afaka manohana ny iray amin'ireo namanao izay nanao toy izany koa.
8. Tsy misy dikany ianao fa ratsy
Azo antoka fa mety ho henjana ny fiainana, ary mila mimenomenona sy mandrotsaka indraindray isika rehetra, fa raha tsy manao na inona na inona ianao FA mimenomenona dia mety tsara izany misy poizina . Tsy zavatra izay tian'ny olona hafa ho eo.
Raha mijanona maharitra amin'ny zava-dratsy ianao ary tsy mijery ny lafiny mamiratra amin'ny fiainana dia tsy ho orinasa mora na mahafinaritra ianao.
rahoviana no mivoaka ny vanim-potoana 3 an'ny amerikana rehetra
Mety ho sarotra amin'ny namana iray ny mihaino anao mitaraina hatrany hatrany, indrindra raha, raha ny fihevitr'izy ireo dia misy zavatra tsara be dia be mitranga eo amin'ny fiainanao.
9. tara foana ianao
Ny fotoana ara-potoana fa tsy ny tanjonao mahery? Mety te hiasa amin'izany ianao. Ho takatry ny olona foana raha tara be ianao izao noho ny antony tsy voafehinao.
Na izany aza, raha tsy mahomby hatrany ianao rehefa miteny hoe hanao izany dia tsy azo omena tsiny ny namanao noho ny fahatsapanao tena tsy manaja azy ireo loatra na manome lanja ny fotoanany.
Ataovy amin'ny hafa…
Fantatro fa kely dia kely ara-Baiboly izao rehetra izao, fa ny hafatra fototra eto dia ataovy amin'ny hafa araka izay tianao hataon'izy ireo aminao.
Raha ny fitondran-tenanao amin'ny namanao dia fihetsika tsy ekenao aminy, dia mila mandinika indray ianao, manisy fanovana vitsivitsy, ary manandrana mampiseho azy ireo fa manao ezaka marina ianao.
Amin'ny fahatsiarovan-tena sy fiheverana kely fotsiny dia azonao atao ny mikolokolo ireo fisakaizana sarobidy ireo ary azo antoka fa maharitra mandritra ny androm-piainany izy ireo.
lisitry ny zavatra hatao rehefa mankaleo ianao
fitiavana ny lehilahy efa manambady
miala amin'ny olan'ny fifampitokisana amin'ny fifandraisana
famantarana ianao tovovavy tsara bika
inona no hatao ao an-trano rehefa mankaleo anao
ny fomba hifindra amin'ny olona tsy tia anao